Layaabka Aduunka: Halis Mise Geesinimo? – Wargeyska Saxafi
Layaabka Aduunka: Halis Mise Geesinimo?
Haweenay u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Lisa Wardle da’deeduna tahay 32-Jir, ayaa go’aansatay inay badwaynta Atlantic-ga kaga talowdo laash, jirid geed oo ay qalajisay ka samaysatay, taas oo sida ay u xustay ujeedada ugu wayn ee ay ka lahaydna ahayd sidii ay u muujin lahayd in haweenku ka geesinimo iyo karti badan yihiin raga.
Gabadhan oo ka mid ah dadka jecel balaalaynta iyo inay daah furaan waxyaabo cusub, waxa ay muddo dhawr bilood gaadhaysa ku noq noqonaysay, shirkadaha waaweyn iyo warshadaha farsameeyay doonyaha, socodka dheer lagu galo ee dalkeeda, kuwaas oo ay ka codsatay inay siiyaan dooni iyo lacag ay kaga talowdo badwaynta Atlantic-ga laakiin waxa codsigeedaasi ku dhamaaday bilaa rejo, ka dibna waxa ay ku dhaqaaqday talaabo ay kaga maarmayso baryadaas.
Sida ay warbaahinta dalkeedu ku warantay waxa Lisa Wardle ay gunta ku jartay geed wayn oo leh jirid aad u balaadhan oo ilaa laba mitir iyo dheeraad balaceedu gaadhayo, taas oo inta ay qalajisay, ka dibna gudaha ka qortay oo sida laashka oo kale ay u samaysatay ugu danbayntiina ku gashay safar boqol mayl ah oo dhinaca bada ah, kaas oo halis badan iyo dhibaatooyin tiro badan lahaa, laakiin ay u badheedhay sida ay ku doodayso.
Haweenaydan oo faraxsan isla markaana sida ka muuqatay dhamaanteedu uu saaqday Rejada iyo farxada balaadhan ee ay ku qabto, inay gaadhayso hamigeeda ayaa socdaalkeeda u xadhko xidhatay, waxaanay isku biimaysay, mid ka mid ah badaha ugu halista badan dunida oo ah badwaynta Atlantic-ga, taas oo xiliga ay socdaalkeeda go’aansatay lafteedu tahay wakhtiyada ugu adag, waxaanay ugu danbayntii ku jaqaafisay safarkeeda rejada iyo halista badhtanka u yaala.
Dedaal badan iyo waayo iyada uuni og tahay oo ay bada ku gashay ka dib waxa ay gaadhay Jasiiradaha Canary, iyada oo ka gudubtay gacanka wayn ee jasiiradahaasi ku teedsan yihiin ee loo yaqaano, ANTILLES, taas oo ah masaafadii ugu fogayd ee loogu safro laash macmal ah oo aan lahayn waxyaabaha aasaasiga u ah safarka xeebaha.
Haweenaydan oo la waydiiyay sababta ay halista iyo biimada intaa leeg ay nafteeda u galisay ayaa sheegtay in marar kala duwan ay ku fashilantay codsi ay shirkadaha iyo dadka taageerada bixiya kaga dalbatay inay ka taageeraan socdaalkeeda, laakiin ugu danbayntii ay go’aan ku gaadhay inay gacmaheeda ku ciil baxdo, taas oo ay ku samaysatay laas geed jiridii ay ka qoratay oo aan tacabkii ay iyadu galisay mooyee, wax lacag ahi kaga bixin.
Sidoo kale waxa ay gabadhani tilmaantay in halista intaa leeg ay u gashay sidii ay u muujin lahayd in haweenku, ka geesinimo iyo karti badan yihiin raga, oo ay u babac dhigi karaan dhibaato la mid ah ta Ragu jiidho iyo mid ka sii adag, taas oo sida ay ku doodayso u rumowday oo ay ka si dhabb ah uga guul gaadhay.
January 17, 2017 Wargeyska SaxafiANTILLES, Halis, Haweenay
Previous Previous post: Duulimaadkii Ugu Qiimaha Jabnaa Aduunka: London Ilaa New York $ 68 Dollar Oo Kaliya
Next Next post: Maxaa Ku Cusub Caafimaadka? Qosolka Oo Waxtar U Leh Jidhka iyo Maskaxdaba